Izikolo eziPhakamileyo ezi-13 eCanada 2022
Novemba 27, 2021 UBlessius Chibuike
Eli nqaku linoluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo zili-13 eCanada. Qaphela ukuba izikolo zidweliswe apha ngezantsi azidweliswanga kuba zimbi okanye zihlwempuzekile ngokwazo kodwa zithatha ezona zikhundla ziphantsi kuluhlu lwezikolo eziphakamileyo eCanada.
Ukuhlelwa kwezikolo kubhalwe ngokwamanqanaba aphuma kwiZiko iFraser, umndilili wenqanaba lezikolo ngu-6.0, ingxelo yakutshanje evela kwiziko iFraser yile ka-2019. Izikolo zidweliswe ngokulandelelana ukusuka kwezona zimbi ukuya phezulu, ukuya kwezona zihamba phambili; phakathi kwezikolo eziphakamileyo ezingama-252 eCanada ezi-13 ezimbi ziya kudweliswa kuphela.
Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba Izikolo eziphakamileyo zaseCanada zikwinqanaba eliphakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwihlabathi liphela kwaye ngokubanzi, iCanada yenye yezona ziluhlobo luhle emva kokufundisisa-kumazwe aphesheya kwihlabathi namhlanje ngamawaka abafundi bamanye amazwe abahamba minyaka le.
Nangona kunjalo, kwimeko yokusekwa kwezikolo eziphakamileyo, nokuba zinokulunga kangakanani na ezi zikolo, ezinye zazo kufuneka zibe sezantsi kuluhlu kwaye ezo ziphantsi koluhlu zithathwa njengezona zikolo zibalaseleyo ilizwe.
Oku akuthethi kuthi nangayiphi na indlela ukuba izikolo ezizifumana ziphantsi kolu luhlu zizikolo 'ezingenzi nto'. Zizikolo ezilungileyo ngokomndilili kodwa kuluhlu olunezikhundla ezikhoyo, ezinye izikolo kufuneka zithathe ezona zithuba zincinci.
1 Izikolo eziPhakamileyo ezi-13 eCanada
1.1 Isikolo samabanga aphakamileyo iChetwynd
1.1.1 Izibalo zeSikolo
1.2 Isikolo samabanga aphakamileyo iFort St James
1.2.1 Izibalo zeSikolo
1.3 Isikolo samabanga aphakamileyo saseHazelton
1.3.1 Izibalo zeSikolo
1.4 Isikolo samabanga aphakamileyo iPort Hardy
1.4.1 Izibalo zeSikolo
1.5 INtaba i-Elizabeth
1.5.1 Izibalo zeSikolo
1.6 Isikolo esiphakamileyo saseLambrick Park
1.6.1 Iinkcukacha-manani zesikolo
1.7 Ichibi laseFraser
1.7.1 Iinkcukacha-manani zesikolo
1.8 Isikolo samabanga aphakamileyo iLake Cowichan
1.9 U-Queen Elizabeth uyaqhubeka neMfundo
1.9.1 Iinkcukacha-manani zesikolo
1.10 Isikolo seLangley Flying
1.10.1 Iinkcukacha-manani zesikolo
1.11.1 Iinkcukacha-manani zesikolo
1.12 Isikolo samabanga aphakamileyo i-Kwantien Park
1.12.1 Iinkcukacha-manani zesikolo
1.12.2 Isikolo samabanga aphakamileyo iSa-Hali
1.12.3 Izibalo zeSikolo
1.14 Amanqaku acetyiswayo
Izikolo ezili-13 eziphakamileyo kakhulu eCanada zidweliswe apha ngezantsi:
Isikolo samabanga aphakamileyo iChetwynd
Isikolo samabanga aphakamileyo iFort St James
Isikolo samabanga aphakamileyo saseHazelton
Port Hardy Isikolo esiphakamileyo
Isikolo samabanga aphakamileyo iMount Elizabeth
Isikolo esiphakamileyo saseLambrick Park
Isikolo samabanga aphakamileyo iFraser Lake
Isikolo samabanga aphakamileyo iLake Cowichan
U-Queen Elizabeth uyaqhubeka neMfundo
Isikolo seLangley Flying
Isikolo samabanga aphakamileyo iMacKenzie
Isikolo samabanga aphakamileyo i-Kwantien Park
Isikolo samabanga aphakamileyo iSa-Hali
Isikolo samabanga aphakamileyo iChetwynd siseChetwynd, eBritish Columbia, Canada. Ikwasesekondari esidlangalaleni esijolise ikakhulu ekusetyenzisweni kwabemi baseChetwynd, kwisikolo samabanga aphakamileyo iChetwynd sibekwa kwindawo yokuqala kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Ukulinganiswa kweChetwynd kuye kwehla ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo njengoko kuye kwehla ileli ukuba ibe sesona sikolo simbi eCanada. Ngelixa umndilili wezikolo zaseCanada zazingama-6.0, ngo-2015 esi sikolo sasilinganiswe nge-3.5, ngo-2016 sasilinganiswe nge-2.9, ngo-2017 sasilinganiswe nge-1.9, ngo-2018 salinganiswa sasiyi-1.7 sathi ngo-2017 safumana i-0.0. kwaye waba ngowokuqala phakathi kwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Isikolo samabanga aphakamileyo iChetwynd silawulwa kwaye sikhokelwe sisithili sesikolo, uMlambo woXolo, Canada. Isikolo samabanga aphakamileyo iChetwynd senziwe ikakhulu ukulungiselela abafundi abavela kwizikolo ezithathu zaseprayimari zommandla.
Indawo: 5000, 46th Street, Noth-mpuma Chetwynd, British Columbia, Canada.
Umlinganiselo wesayizi weklasi: Iintlawulo.
eyona ulwimi: Ulwimi lesingesi.
Isini esamkelweyo: Indoda nendoda.
Ubhaliso lonyaka: Iintlawulo.
Fort st. Isikolo samabanga aphakamileyo iJames sidweliswe okwesibini kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada. Fort st. UJames sisikolo sikarhulumente esiphantsi kolawulo kunye nolawulo lwesithili sesikolo samachibi aseNechako kwaye sikumbindi weFort St. James.
Isikolo iFort St. James sibhale ukunyuka okucacileyo kumanqaku abo ngaphambi kokuwa okumangalisayo kokujoyina iligi yezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Ngo-2015 isikolo samabanga aphakamileyo iFort St. James sasilinganiswe nge-3.8, ngo-2016 sanyuka saya ku-4.2, ngo-2017 sabambana saya ku-0.6 ngo-2018 ababekwa ndawo ngenxa yezizathu ezaziwa ngabafrasi kwaye ngo-2019 bafumana inqanaba le-0.0 kwaye babekwa kwinqanaba njengezona zikolo zibi kakhulu eCanada.
Indawo: I-PO Box 307, Fort St. James yaseBritish Columbia.
Ubungakanani beklasi yeAvera: Iintlawulo.
Ulwimi oluphambili: Ulwimi lesingesi.
Ubhaliso lweeyaly: Iintlawulo.
Ummandla ophakamileyo waseHazelton sisikolo esiphakamileyo sikarhulumente esibhalisa kuphela abafundi abakumaBakala 9-12 kwaye bakwinqanaba elilelona libi kakhulu kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada kunye neChetwynd kunye neFort St, iZikolo eziphakamileyo zaseJames, ezikwanenqanaba 0.0.
Esi sikolo siphantsi kolawulo lwesithili seSithili seNtaba zoNxweme, esi sikolo siye saphakama ngokukhawuleza saza sehla kumanqaku aso; ngo-2015 bafumana ukulinganiswa kwe-1.4, ngo-2016 isikolo silinganiswe nge-0.0, ngo-2017 baphinde baphuculwa kwaye balinganiswa nge-2.0, ngo-2018 ireyithingi iphinde yafika ku-0.0 kwaza ngo-2019 yaphinda yaba ngu-0.0, yaze yaqhubeka uluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Indawo: I-PO Box 300, Hazelton, British Columbia, Canada.
Isikolo samabanga aphakamileyo iPort Hardy
Isikolo esiphakamileyo sasePort Hardy sisikolo esiphakamileyo sikarhulumente phantsi kwesithili sesikolo saseVancouver Island North. Esi sikolo sasenzelwe ikakhulu abafundi abahlala ePort Hardy kwaye sikwindawo yesibini kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Amanqanaba esikolo samabanga aphakamileyo ePort Hardy ebesihla enyuka kule minyaka idlulileyo; Ngo-2015 yafumana ireyithingi engu-1.7, ngo-2016 yenyuka yaya ku-2.7, ngo-2017 yehla kancinci yaya ku-2.5, ngo-2018 yayingu-0.0 kwaye ke ngo-2019 yenyuka yaya ku-0.7.
Indawo: I-PO Box 27, ePort Hardy, eBritish Columbia, eCanada.
Isini esamkelweyo: Amadoda nabasetyhini
Ubhaliso lonyaka: Kuya
Isikolo samabanga aphakamileyo iMount Elizabeth sikwindawo yesithathu kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada. Sisikolo sikarhulumente kwaye siphantsi kolawulo nolawulo lwesithili seNxweme seNtaba, sasekwa nge-15 kaSeptemba 1952.
Nangona ireyithingi yesikolo samabanga aphakamileyo iMount Elizabeth ingafikanga kwi-avareji kule minyaka idlulileyo, bebesondele kumndilili kude kube ngunyaka odlulileyo; Ngo-2015 isikolo esiphakamileyo saseMount Elizabeth salinganiselwa i-5.3, ngo-2016 safundelwa i-4.9, ngo-2017 bafumana i-5.7 kwaye kwaba njalo ngo-2018, ngo-2019 isikolo sarekhoda ukuhla okumandla kumanqaku abo njengoko babebekwa amanqaku I-1.7 kwaye yajoyina uluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Indawo: 1491 Kingfisher Avenue, Kitimat, British Columbia, Canada.
Isikolo esiphakamileyo saseLambrick Park sisikolo sikarhulumente esasekwa ngo-1976, simi kufutshane neLambrick Park, siphakathi kwezona zikolo ziphakamileyo eCanada kwaye ikwindawo yesine kuluhlu. Iphantsi kolawulo lwesithili sesikolo i-61 ye-Greater Victoria.
Kule minyaka idlulileyo, isikolo esiphakamileyo saseLambrick Park sikhe sonyuka ngokuthe ngcembe kumanqanaba esikolo sabo emva koko sawa ngokukhawuleza; ngo-2015 bafumana i-4.3, ngo-2016 inyuke ngo-4.7, ngo-2017 yayingu-4.8, ngo-2018 yancitshiswa kakhulu yaya ku-2.4 kwaza ngo-2019 kwaba ngu-1.9.
Indawo: I-4139, iTorquay Dr, iVictoria, iBritish Columbia, Canada.
Bakala: IBakala 9-iBanga le-12.
Isikolo samabanga aphakamileyo iFraser Lake sisikolo esiphakamileyo sikarhulumente esiphantsi kolawulo lwesithili sesikolo seNechako Lakes, sikwindawo yesihlanu kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Ukuthelekiswa kwesikolo samabanga aphakamileyo iFraser Lakes kuye kwehla kule minyaka idlulileyo; ngo-2015 yabekwa i-2.3, ngo-2016 yafumana i-2.8, ngo-2017 kwakungekho luhlelo kwesi sikolo, ngo-2018 bafumana inqanaba elimangalisayo le-4.6 eyayiludwe lokuthula olungakholekiyo kuthathelwa ingqalelo iireyithingi zabo zangaphambili, kwaza ngo-2019 baphinde banikwa inqanaba elibi le-2.1 njengoko befumene isihlanu kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Indawo: Inkonzo ye-PO Box 1002, eFraser Lake, eBritish Columbia, eCanada.
Isikolo samabanga aphakamileyo iLake Cowichan sisikolo esiphakamileyo sikarhulumente esivulwe kwi-1950 kwaye siphantsi kolawulo lweSithili seCowican Valley School kwaye sisikolo sesithandathu kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada; Esi sikolo sisuke ebabeleni saya engceni njengoko isilayidi sisezantsi kakhulu kwintsebenzo yabo.
Ngo-2015 esi sikolo safumana inqanaba elincomekayo lika-6.8, ngo-2016 bafumana ireyithingi engu-5.2, ngo-2017 balinganiselwa i-5.6, ngo-2018 abafumanekanga kwaye ngo-2019 babekwa kwi-2.3 kwaye bazifumana bekufutshane nasezantsi. uluhlu.
Indawo: Indlela esemazantsi e-190 yonxweme, i-PO Box 40, iLake Cowichan, iBritish Columbia, Canada.
Bakala: ibakala 8 - iBakala 12.
Ubhaliso lonyaka: iyahluka.
Imfundo eQinisekayo kaElizabeth Elizabeth sisikolo esiphakamileyo sasebusuku esenzelwe abafundi ngokukodwa, sisikolo sasebusuku njengoko imisebenzi yabo iqala ngentsimbi yesi-3: 00 ngokuhlwa. Iphantsi kolawulo lwesithili sesikolo iSurrey kwaye ikwindawo yesixhenxe kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada. Ukusebenza kwesi sikolo kuye kwehla kancinci kule minyaka idlulileyo.
Ngo-2015 bakalwa nge-4.1, ngo-2016 balinganiselwa i-4.5, ngo-2017 bafumana ireyithi engu-3.6, ngo-2018 bakalwa nge-3.1 kwaza ngo-2019 esi sikolo sabalwa nge-2.6 njengoko behla emazantsi eleli ukuze bajoyine ezona zikolo zimbi eCanada.
Indawo: Ngo-9457 uKing George Blvd, surrey, British Columbia, Canada.
Ubhaliso lonyaka: Abafundi be325
Isikolo esiphaphazelayo iLangley sisikolo sikarhulumente esikwisikhululo senqwelomoya saseLangley, sasekwa ngonyaka we-1994. Isikolo esiphaphazelayo iLangley siphantsi kwesithili saseLangley kwaye sikwindawo yesibhozo kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada njengoko inqanaba labo belisoloko ngaphantsi kwenqaku lesine kule minyaka idlulileyo.
Kwi-2015 Isikolo esiphaphazelayo saseLangley sabekwa kwi-3.8, ngo-2016 babekwa kwi-3.2, ngo-2017 umlinganiso wabo wehla waya kwi-3.0, ngo-2018 wabekwa kwi-2.3 kwaye ngo-2019 wanyuka kancinci waya ku-2.8 kodwa oku akuzange kubasindise ukusuka ezantsi kuluhlu lwezikolo eCanada.
Indawo: 21405, 56 Avenue, Langley, eBritish Columbia Canada.
Isikolo samabanga aphakamileyo iMackenzie emi kumsele onentaba onamatye sisikolo esiphakamileyo sikarhulumente eMaxKenzie phantsi kwesithili sesikolo i-57 iPrince George. Isikolo samabanga aphakamileyo iMacKenzie sasekwa ngonyaka we-1971 kwaye sikwindawo yesithoba kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada.
Ngo-2015 isikolo esiphakamileyo saseMackenzie silinganiselwe i-2.1, ngo-2016 isikolo safumana i-0.3, ngo-2017 no-2018 isikolo asizange sifumane isikhundla ngenxa yezizathu ezaziwa kwiziko laseFraser kwaye ngo-2019 babalwa nge-3.2.
Indawo: Ingxowa 140 500 Skeena Dr, Mackenzie, British Columbia, Canada.
Bakala: ibanga lesi-7- ibanga le-12.
Ulwimi oluphambili: IsiNgesi lauage.ng
I-Kwantien Park yindawo ephakamileyo yoluntu kwaye iyinxalenye yesithili sesikolo i-36 Surrey. Isikolo samabanga aphakamileyo i-Kwantien Park samiselwa ngoSeptemba 2002 kwaye sikwindawo yeshumi kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada. Bebekwisikhundla nje ngezantsi okanye ngaphezulu komndilili kude kube kunyaka ophelileyo behle phantsi.
Kwi-2015 kwantien Park kwisikolo esiphakamileyo babekwa kwi-5.4, ngo-2016 babekwa kwi-5.2, ngo-2017 bafumana i-5.9, ngo-2018 babekwa kwi-6.3 kwaye ngo-2019 i-Kwantien yabekwa ngokumangalisayo kwi-3.3.
Indawo: Isitalato i-10441 132, Surrey, columbia yase-Bhritane, Canada.
Isikolo samabanga aphakamileyo iSa-Hali sisikolo esiphakamileyo sikarhulumente kwindawo yaseKamloops esebenza kuphela kwinkqubo yeesemester ezimbini. Isikolo samabanga aphakamileyo iSa-Hali sikwindawo yeshumi kuluhlu lwezona zikolo ziphakamileyo eCanada kunye neKwantien Park kwisikolo esiphakamileyo.
Ngo-2015 babekwa kwi-5.2, ngo-2016 bafumana i-4.4, ngo-2017 babekwa kwi-3.3, ngo-2018 bafumana i-4.2 kwaye ngo-2019 bafumana i-3.3 ngaloo ndlela baqhubeka behla uluhlu lwezikolo eCanada.
Ulwimi oluphambili: Ulwimi lesingesi:
Eli nqaku linoluhlu oluneenkcukacha zezona zikolo ziphakamileyo zili-13 eCanada kunye nezibalo zazo. Oku kubhalwe ngokwenqanaba lonyaka ngu IZiko leFraser.
Nceda uqaphele ukuba olu luhlu alunakuhambelana nezinto ezahlukeneyo zabaphengululi abahlukeneyo; nanjengoko abanye abantwana benokwenza ngcono kwisikolo esikudidi olusezantsi kuluhlu kunokuba isikolo sikwindawo ephezulu. Ke ngoko uhlalutyo lobuqu lunokubonisa ukuba lungcono.
IYunivesithi ezi-7 eziGwenxa eCanada
Iikholeji ezingama-20 eziBhalisiweyo eCanada
I-70 yeeScholarships ezingathandekiyo zaseCanada
Ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada ngezifundo
Iikhosi zasimahla zobunjineli boomatshini kwi-Intanethi
Post Previous:Isidanga seMasters simahla sooTitshala
Okulandelayo Post:Uluhlu lweeDyunivesithi zaseTshayina phantsi kweCSC ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo